PCBA စက်ရုံပြရန် - Weltech အီလက်ထရောနစ်လီမိတက်
တင်းကျပ်နှင့် Flexible PCB
Smt ညီလာခံ Capability
E-mail ကို: sales@well-pcb.com
E-mail ကို: sales@weltechpcb.com
မျက်နှာပြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အရာများ...
1. လေပူညှိခြင်း (spray tin) ပူနွေးသောလေကို ဂဟေညှိခြင်း (spray tin ဟုခေါ်သည်) သည် PCB ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သွန်းသောသွပ် (ခဲ) ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြားချပ်ချပ် (မှုတ်ထုတ်ခြင်း) ဟုခေါ်သည်။ .။
Oxidation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုနည်းလမ်း...
ရွှေ pcb ဘုတ်ပြား၏အောက်ဆီဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုနည်းလမ်း? 1. နှစ်မြှုပ်ထားသော ရွှေပြား၏ ဓာတ်တိုးမှု ညံ့ဖျင်းပုံ- 2. နှစ်မြှုပ်ထားသော ရွှေပြား၏ ဖော်ပြချက် ဓာတ်တိုးခြင်း- နှစ်မြှုပ်ထားသော ရွှေပတ်လမ်း၏ ဓာတ်တိုးခြင်း...
pcb board desi ကိုကြည့်ရအောင်...
pcb board design နဲ့ pcba တို့ကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင် pcb board design ကို လူတော်တော်များများ သိကြပြီး နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မကြာခဏ ကြားနေရပေမယ့် PCBA အကြောင်းကို သိပ်မသိကြသလို pr နဲ့တောင် ရှုပ်နေမယ်ထင်ပါတယ်...
PCB ဆိုတာဘာလဲ ဆားကစ်ဘုတ်ဆိုတာဘာလဲ (ci...
PCB ဆိုတာဘာလဲ။ PCB ဘုတ်သည် ဆားကစ်ဒီဇိုင်နာမှ လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနားလည်သည်။ ဆားကစ်ဘုတ်ကို တီထွင်သူမှာ Austrian Paul Eisl ဖြစ်သည် (PaulEisl သည် ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ရေဒီယို စက်တစ်ခုတွင် ဆားကစ်ဘုတ်ကို မွေးစားခဲ့ပြီး occ...
Multilayer circuit board ဆိုတာ ဘာလဲ] ဘာလဲ...
multilayer circuit board ဆိုတာ ဘာလဲ၊ multilayer PCB circuit board ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ နာမည်အရ အလွှာပေါင်းစုံ ဆားကစ်ဘုတ်ကို အလွှာနှစ်ထပ်ထက်ပိုသော အလွှာပေါင်းစုံ ဆားကစ်ဘုတ်ဟု ခေါ်နိုင်သည်။
Smd PCB ညီလာခံ, Pcb ညီလာခံစက်ရုံ, Pcb ပေးသွင်း , Flex ကို Pcb ညီလာခံ, Pcb Layers , ဒီဇိုင်း Pcb တိုက်နယ်,